Amin'ny teny arabo rakibolana
Amin’ny teny arabo rakibolana
Ny tena tsara dia mpiara-ho an’ireo mpianatra ny teny arabo, avy mpanao voalohany ny sehatra anelanelany ny ambaratonga. Ahitana ny tena ampiasaina ny teny tamin’ny teny arabo ankehitriny. Ny antontan-taratasy PDF azo adika ho jerena eo amin’ny finday avo lenta na ny iPad (mampiasa ny boky). Toy ny frantsay, ny fiteny arabo dia napetraka ny mombamomba ny mpisolo.
Voalaza fa Lahatsary mampiaraka tapitrisa ny isan’ny mpiteny ny karazany rehetra ny teny arabo ao amin’izao tontolo izao. Teny arabo no ampiasaina any Maraoka, i Alzeria, Tonizia, Ejipta, Syria, Jordania ary firenena hafa maro.
Mianatra ny teny arabo ankehitriny
Ianao dia manomboka miaraka amin’ny fehezanteny tsotra amin’ny teny arabo, ary ny iray isan’andro voambolana alohan’ny hirosoana amin’ny haingana manokana.
Jereo, henoy, ary hamaly amin’ny teny arabo
Mahafinaritra ny mampiasa sy mahafinaritra mba hianatra. Manao ny tena ny diany mba hahazo ny asa amin’ny alalan’ny fianarana ny teny sy andian-teny amin’ny teny arabo. Ianao dia hianatra ny an-jatony ny teny sy andian-teny ao amin’ny kely indrindra fotoana. Ny feo dia amin’ny teny arabo sy teny frantsay.
Vao mihaino, mandray sy ankafizo
Ny customer service dia amin’ny rafitry ny raharaham-barotra. Na inona na inona ny fanontaniana, isika dia ho foana eto mba hanampy anao. Miezaka ny hanao izany ny toerana nisy olana teo am-poana amin’ny fiteny valo samihafa. Raha mahita fahadisoana, tsindrio fotsiny ny mariky ary dia vaovao farany amin’ny toerana. Ary dia handefa anareo ny zavatra maimaim-poana ihany koa. Isika manampy ny olona hianatra ny teny, satria ny ankamaroan’ny unciné taona. Ianao ho gaga ny hafainganam-pandeha izay ianao hianatra mba hahazoana avy amin’ny teny arabo miaraka amin’ny Lingua Fivarotana
← Ny arabo, ny fomba fijery. Arabo lehilahy mainty ny vehivavy fiarahana fifandraisana. Ankizivavy Mangataka Ry Zalahy
I Isiraely Chat →